I-China Play Imicimbi Wokukhiqiza Nezindawo | Izinsimbi Zokudlala zeHaiberi
IHaiber Play inezinto ezahlukahlukene zokuzijabulisa ongakhetha kuzo. Lezi zinto zokuzijabulisa zenzelwe ngokuthanda kwezingane. Faka ezinye izinto ezikhangayo endaweni yokudlala ngokusho kwezinto ezikhona, ezingenza izingane zijabule ngokwengeziwe futhi zikhuphule izinga lokuvakasha eliphindwayo lendawo yokudlala.
I-Hanging Ring Passage
Isithiyo se-X Shape
Isithambile Sokubopha Inkomo
Isithiyo se-Wave Webving
Imicimbi yokudlala yenziwa ngezinto ezisezingeni eliphakeme futhi eziqinile, futhi okwenziwe kanye nokwakheka kuhambisana ngokuphelele namazinga okuphepha. Idizayini yemidlalo ye-gameplay inengqondo ukunciphisa umthwalo wokusebenza kwakho.
Esedlule: I-Adventure Theme-006
Olandelayo: Ingane Ethambile Dlala Combo